Kula xisaabtanka madaxweynaha Honduras ee musuq-maasuqa uu gaystay
Tani waa faallo ka tarjameysaa aragtida Dawladda Mareykanka
Booliska Honduras ayaa xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Juan Orlando Hernandez 15-ki February, kaddib marki ay codsi ka heleen Dowladda Mareykanka oo dooneysa in loo soo gacan-geliyo si maxkamad loo soo taago, sababo la xiriira danbiyada lagu eedeeyay ee ah ka ganacsiga daroogada.
Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an la dagaallanka musuqa iyo sare u qaadidda dimoqraadiyadda, ku dhaqanka sharciga iyo isla xisaabtanka Bartamaha Ameerika.
“Waxaan rumeysannahay qodobaddaasi in ay muhiim u yihiin mustaqbal ifaya oo ka hana-qaada Bartamaha Ameerika,” sidaasi waxa yiri Xohayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken.
Si horay loogu dhaqaajiyo mudnaantaan, ayay Dowladda Mareykanka hadda shaaca ka qaadday oo ay dadka u soo bandhigeysaa in madaxweynihi hore ee Honduras Juan Orlando Hernandez lagu daray liiska jilayaasha musuq-maasuqa ee kasoo horjeeda dimoqraadiyadda, iyadoo loo cuskaday qodobka 353 ee Cahdiga saddex-geesoodka ee horumarinta Mareykanka iyo Waqooyiga.
Guud ahaan, dadka lagu daro liiskaan ayaa ku biiraya kuwa laga xaarantinimeeyay dal-kugalka iyo ogolaashaha Mareykanka. Hernandez waxaa lagu daray liiskaas, 1-di July ee sannadki 2021-ki.
Sida ay sheegeen qalab warbaahineed oo dhowr ah oo lagu kalsoonaan karo. Juan Orlando Hernandez ayaa fududeeyay falal la xiriira musuq-maasuq iyo ka ganacsiga dooragada la safriyo, iyada oo lamarayo hab sharci darro ah si loogu maalgeliyo olole siyaasadeed.
Waxaa intaasi sii dheer in Hernandez uu aqoonsaday qof marqaati ah oo la dhaariyay oo ku hor-marqaati furay maxkamad federal Mareykan ah, kaasoo sheegay in uu lacago ka helay habkaasi sharci-darrada ah ee ka ganacsiga daroogada ee qeybta ka ah ololaha siyaasadda.
Dowladda Mareykanka waxay sii wadi doontaa in ay adeegsato wax walba oo karaankeeda ah si sare loogu qaado la xisaabtanka musuq-maasuqa iyo weerarada kale ee dhinaca ammaanka, xasilloonida iyo dhinacyada dimoqraadiyadda dadka reer Honduras, Bartamaha Ameerika iyo caalamka.
“Waxaan sii wadi doonnaa in aan kala shaqeyno saraakiisha dowladda Honduras iyo xubnaha Bulshada Rayidka ah iyo qeybaha shirkadaha gaarka ah ee muujiyay sida ay uga go’antahay la dagaallanka musuqa iyo xoojinta dimoqraadiyadda iyo dowlad-wanaagga, oo ay ku jirto qeybo ka mid ah siyaasadda guud ee ah xallinta xididadda sababta u ah muhaajiriinta aan joogtada aheyn ee ka imanaya gobolka,” sidaasi waxaa shaaca ka qaaday xoghaye Blinken.
Maraykanku wuxuu sii wadi doonaa taageerada dadka Honduras kuwaas ku dadaalaya in ay wax ku biiriyaan oo ay ka faa'iidaystaan hay'adaha dimuqraadiga ah, abuuraan fursado dhaqaale oo siman, iyo abuurista mustaqbalka ay u rabaan naftooda iyo qoysaskooda.